Lozan’ady, lazon’ady… | NewsMada
Mbola ao anatin’ny ady isika amin’izao. Mandra-pahoviana? Ady amin’ny fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus ihany io fa tsy inona. Ady manimba zavatra, ady mahakely aina… Mitera-doza aza fa misy izao ny efa namoy ny ainy. Irariana ny tsy hitomboan’izany intsony. Lozan’ady izany, nefa miankina amin’ny ataon’ny tena ihany. Na eo amin’ny fanarahana sy ny fitandremana fepetra izany, na amin’ny fitsaboana.
Ny tsy fitandremana kely amin’ny tsy fanarahana amin’ny antsipiriany sy manontolo ny fepetra sy ny fitsaboana amin’ny ady atao no mahatonga ny loza lehibe. Misy ny tsy miraharaha, manao fanahy iniana, tsy mino… Izay ny anisan’ny mahatonga ny loza amin’ny ady na lozan’ady. Ny fitadiavana na ny fivelomana isan’andro ihany, ohatra, no hoe zava-dehibe ho an’ny sasany, mahamaika, manetsika…
Tsy araka izay noheverina sy notetehina anefa ny vokany rehefa tsy misy fitandremana: vao mainka mitera-doza aza. Izay loza amin’ny ady na lozan’ady izay no mahatonga ny lazon’ady: voatery tohizana ary mety mbola haharitra ny ady. Amin’izany, raha tiana halaky sy hifarana ary hahomby sy azo antoka ny ady: mila atao mafimafy sy bebe kokoa no ho ny teo aloha ny fanarahana fepetra.
Ao anatin’ny lazon’ady izao lozan’ady izao, tsy atao mahakivy na hampiverin-dalana: na misy ny namoy aina, na mitombo isa ny mitondra otrikaretina. Ndrao ho very maina tsy amin’ny antony ny ezaka efa niarahan’ny maro hatramin’izay. Izao vao tena mila misikim-ponitra, miray hina, miroso… Ny faharetana amin’izany no ahazoana antoka amin’ny fahombiazana sy ny fandresena amin’ny ady.
Tena ady no atao amin’izao fa tsy ankadasitra: tsy ifampiandrasana, tsy ifanomezan-tsiny na inona mitranga sy atao. Tsy maintsy miatrika ny ady izay te handresy. Tsy resy ho azy amin’izao na amin’ny tsy firaharahana na tsy fitandremana ny fahavalo iombonana, tsy hita maso, mora mihanaka, mbola any… Mila fanefitra amin’izany, ohatra, ny hambon-kevitra diso toerana, ny hambom-po politika…